Na-ekwu maka Free Keto Sweets Ntụziaka Akwụkwọ - Ememe ntụrụndụ
Mbido » Book » Na-arịọ gị Free Keto Sweets Recipe Book
Kedu ihe ị na-eme mgbe ị na-achọ ịgbaso usoro nri nri keto mana ị hụrụ desserts n'anya? Maka ọtụtụ ndị mmadụ, ha na-agbasi mbọ ike ịchọta desserts ndị kwesịrị ekwesị maka nri nri ketogenic. Eitherkwesiri inwe ezigbo ikike iji sie nri iji kwadebe ihe ụtọ dị ụtọ na-enweghị iji ihe ndị anaghị anabata ma ọ bụ na ịchọrọ usoro nri eji megharịa ọnụ nke keto. Na enweghị ma otu n'ime ndị a, ịme desser ndị a na-anabata maka keto ga-esi ike ịme. Na-ewebata Keto Sweets!
Ọ bụrụ na ị nọ na-achọ nsị nnukwu ihe nchịkọta ihe oriri, anyị nwere akụkọ dị egwu maka gị. Enyi anyị, bụ Kelsey Ale, na-enye ya akwụkwọ nchịkọta ihe nchịkọta nke Keto Sweets Dessert Recipes maka FREE maka ndị 500 mbụ. Akwụkwọ nri akwụkwọ Keto Sweets nwere ihe nchịkọta ihe oriri na-edozi ahụ dị na ketogenic nke na-atọ ụtọ.
N'ime akwụkwọ nri nke Keto Sweets, ị ga-ahụ usoro nri eji megharịa ọnụ nke 80 nke gụnyere ọtụtụ desserts dịka almond butter brownie bites, chocolate bachites bites, keto ice cream, mint brownies, chocolate whoopie pies, keto lemon bars, keto popsicles , pecan sandies, raspberry chocolate bark, na ndị ọzọ.
Pịa ebe a iji jidere otu a keto dessert uzommeputa akwụkwọ maka onwe gị taa kpam kpam FREE! Naanị ị ga-akwụ ụgwọ maka mbupu.
Ejikwa onyinye gị bụ onyinye 3 n'efu. Ga-enweta atụmatụ nri ụbọchị asaa nke Keto, Ntuziaka etozụ ahịa na Keto Sweets & Ntuziaka Ntuziaka, na Nduzi Mmalite Keto
The Kwadoro akwukwo nri bụ 100% n'efu. Ihe niile a gwara gị bụ ịkwụ ụgwọ obere ego iji kpuchie mbupu na njikwa na Keto Sweets Cookbook team ga-elekọta ndị fọdụrụ. Pịa ebe a iji nweta akwukwo uzommeputa recipe Keto
Otu echiche na “Na-arịọ gị Free Keto Sweets Recipe Book"
Aha ya bụ Kathy Gorman ekwu, sị:
September 25, 2020 na 4: 27 pm
Ana m enye iwu akwụkwọ nri Keto Sweets "n'efu" na ụfọdụ ihe ndị ọzọ m chere, mana ejighị m n'aka, yabụ achọrọ m ịkagbu iwu m nke ihe niile. Ejila kaadị kredit m ma ọ bụ bute ihe ọ bụla.